Peter de Clercq oo Maanta Kormeeray xeryaha ay ku jiraan Dadka ka soo Barakacay Yemen ee ku sugan Bosaaso – Radio Daljir
Agoosto 4, 2015 7:13 b 0
Talaado, Ogoosto 04, 2015 (Daljir) —Ku-xigeenka Ergayga Qaramada Midoobay ee dalka Somalia, Peter de Clercq ayaa maanta booqasho gaaban ku soo gaaray degmada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari, iyadoo ay ku wehlinayeen booqashada xubno kale oo ka tirsan Xafiiska QM ee Soomaaliya.
Wasiir ku xigeenka Arrimaha Gudaha Puntland, C/llaahi Saalax (Qoobdeero), Madaxda maamulka Gobolka Bari iyo kan Degmada Bosaaso ayaa Mas\_’uulkan ku soo dhaweeyay magaalada Bosaaso ,waxaana aad loo adkeeyay amniga magaalada.
Peter de Clercq ayaa booqasho ku tagay xeryo ay ku jiraan boqolaal dadweyne ah oo ka soo barakacay colaadaha iyo dagaalada ka socda Yemen, waxaana uu shirar gooni-gooni ah uu la yeeshay mas’uuliyiinta gacanta ku haya xeryahaas.
“Halkan maanta waxaan ku soo dhaweynay wafdi heer sare ah oo ka socday Qaramada Midoobay ,waxa ay u yimaadeen sidii ay u kormeeri lahaayeen xaaladda qaxootiga halkan ku sugan” ayuu yiri wasiir Karaash oo warbaahinta la hadlay.
“Qaramada Midoobay waan uga mahad-celinaynaa taageerada ay siiso Soomaaliya ,balse xiligan loo joogo waaan in wax laga qabto xaaladda qaxootiga halkan ku soo qul-qulaya “ ayuu mar kale yiri Axmed Karaash.
Ugu dambeyn, Peter ayaa sidoo kale booqday dekedda magaalada Bosaaso oo bilihii la soo dhaafay ay ka soo dagayeen Qaxooti aad u badan oo isugu jira Soomaali iyo Ajaanib kale oo u dhashay Yemen.
DHAGAYSO:Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo Wariye Maxamuud Cabdi